China etched anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ Manufacture na Factory | Huaxiao
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere Etched igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ
Obosara: 1000/11219 / 1500mm ma ọ bụ ahaziri
Ogologo: 1000 - 6000mm / eriri igwe
General ụkpụrụ / ngwaahia:
Eriri partent igwe anaghị agba nchara Opal ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara Oasis ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara
Onyunyo ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara Usoro ntanetị anaghị agba nchara Usoro nke Kaleidoscope igwe anaghị agba nchara
Bara nnukwu uru ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara Mmanụ acomụ n'ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara Mirage ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara
Tickpụrụ Celtic anaghị agba nchara Neurona ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara Iskpụrụ Daisies anaghị agba nchara
Igwe ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara Speckle ụkpụrụ igwe anaghị agba nchara
Mfe nkọwa banyere Etched igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọs
Ngwongwo eji achọ mma abụwo ihe dị mkpa maka ime ụlọ dị oké ọnụ ahịa maka ọtụtụ afọ ugbu a, na mpempe akwụkwọ nchara igwe anaghị agbacha elu nke ọkacha mmasị. Stunningkpụrụ ndị a ma ama na mpempe akwụkwọ nchara na-enweghị atụ na -emepụta amara na nkwa nke ịdị ogologo ndụ. Etched anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ N'ihi ya, bụ oké ulo oru mbo maka ịchọ mma ma ọ bụ ịgbanwe ihe ọ bụla oru ngo; ọ bụrụ ebe obibi ma ọ bụ nke azụmahịa.
Ọdịdị dị mma nke ọrụ ígwè chọrọ ọtụtụ afọ nke nkà na nkà. Nke a bụ ụdị nke oge a na nkà na kwesịrị a ọkachamara aka. Anyị na-enye ahụmịhe na ahụmịhe na mmetụ nke nka mara mma na mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara. Anyị aghụghọ bụ otu n'ime ha iche iche, na kpọmkwem gụchara maka a ezi udidi na flawlessly mgbagwoju anya etching gburugburu ihe nakawa etu esi.
Maka ụlọ ọrụ anyị, mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara etuto ọ bụla anyị mepụtara bụ nke kacha mma na nka anyị na-eme nke ọma. Anyị nwere ndị otu ndị ọkachamara na-ejide n'aka na naanị ndị kacha mma ka emechara. Anyị na-arụkwa ọrụ dị iche iche na mpempe akwụkwọ anaghị agba nchara etched, gụnyere matte, brushed, wavy na mirror. Anyị na-enyekwa ndị ahịa anyị na ndị ahịa anyị ndụmọdụ iji nye ha ndụmọdụ anyị na atụmatụ ma ọ bụ ọrụ ha.
Mgbalị anyị na-eme mgbe niile bụ ịrụ ọrụ nke ọma na ọhụụ nke ndị ahịa anyị iji nye ha mpempe akwụkwọ nchara etched nke zuru oke maka ọrụ nrọ ha. Ọ bụrụ na ọ bụ mgbidi, ọnụ ụzọ, enyo enyo, ụzọ mbata ọfịs ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, anyị chọrọ ka ndị ahịa anyị nwee ihe kachasị mma maka ihe ha na-achọsi ike; ihe kachasị mma nke etched nchara nchara. Anyị na-ele ọrụ ahụ anya dị ka onye ọkachamara, onye na-ese ihe na onye na-arọ nrọ, otu oge, iji mepụta ihe nwere ike ịdịru ogologo oge na-abịa ma na-anọchite anya ọhụụ na nraranye dị n'azụ ya.
Usoro nke ịmịpụta akwa nchara efere etched bụ akụkọ banyere oke agụụ na ịrụsi ọrụ ike. Anyị na-anya isi na otu ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ ọtụtụ awa iji hụ na anyị kacha mma nke anyị na-ekwe nkwa. Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye ọdịdị nke imepụta nke ga-adịru oge, ya na mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara.
Nke gara aga: embossed igwe anaghị agba nchara
Osote: igwe anaghị agba nchara Angle Bar
Acid Etching igwe anaghị agba nchara
Etched igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ
Metching mpempe akwụkwọ metal
Etching igwe anaghị agba nchara